Nagu saabsan - Kingsine Electric Automation Co., Ltd.
Kingsine Electric Automation Co., Ltd. waxay ku takhasustay Cilmi-baarista & Horumarinta, soo-saarka iyo iibinta Qalabka Imtixaanka & Cabbiraadda Korantada tan iyo aasaaskii 1999 oo sidoo kale lagu sharfay shahaadada shirkadda tikniyoolajiyadda sare iyo shahaado ganacsi ee ay aqoonsan tahay maamulka Shiinaha. Iyada oo ku saabsan xawaaraha horumarka sare sannad kasta, Kingsine waxay ku guuleysataa soo saaraha ugu sarreeya Shiinaha ee qalabka tijaabada korantada ee suuqa tijaabinta tijaabada gudaha.
Cilmi baarista & horumarinta:
Kingsine sidoo kale waxay leedahay farsamoyaqaanno iyo khubaro xoog leh waxayna awood u leedahay inay bixiso xalka tijaabada korantada ee korantada iyada oo la raacayo qeexitaanka macaamiisha, Iyadoo la adeegsanayo fikraddiisa hal-abuurka ah ee All-in-One iyo shatiyado badan, wax soo saarka Kingsine ayaa si wanaagsan loo ansixiyay oo lagula taliyay Machadka Qaranka ee Shiinaha. Metrology iyo machadyada cilmi baarista awooda ee gobol kasta iyo sidoo kale shahaadada CE.
Iyada oo la adeegsanayo ISO 9001: 2000 oo la aqoonsan yahay isla markaana ku taal Aagga Tiknoolajiyadda Sare ee magaalada hoose ee deriska Shenzhen ee Hong Kong, Kingsine waxay isku daraysaa dhammaan habsocodka saxda ah iyo horumarinta habka wax soo saarka ee inta badan ku saabsan Set Test Relay Set, Power Power, Calibrator Power, RTU-Tester & Multifunctional Power Meter , kaas oo hubiya in alaabtiisu ay leedahay dammaanad 3-sano oo tayo leh oo ku saabsan dayactirka bilaashka ah.
Suuqgeynta & Adeegga:
Hadda wax soo saarka Kingsine waxaa ogolaaday in ka badan 70 dal oo adduunka ah warshado badan oo ka mid ah awoodda korantada, metallurgy, petrochemical, macdanta tareenka iyo machad cilmi baaris qaraabo ah iyo sidoo kale ganacsi isku mid ah oo mitir ah iyo warshado soo gudbiya ilaalin, iyo helitaanka soo dhaweynta diiran ee adduunka korantada weyn. & Bandhigga Tamarta sida
POWER-GEN International of USA, Korontada Bariga Dhexe ee Dubai, HANNOVER MESSE ee Jarmalka iyo FIEE Electrical ee Brazil. Its Relay-Tester waxay ku habboon tahay inay u shaqeyso aalado badan oo caan ah oo dunida ka ilaaliya gudbinta sida ABB, SIMENS, ALSTOM, TOSHIBA, SCHNEIDER, AREVA, SEL, GE iwm iyo Kingine sidoo kale waxay siinayaan adeegga buuxa shabaqa qaybinta dalal badan oo Yurub ah, Aasiya iyo Bariga Dhexe.
Ku dheji aaminaadda cusub ee Teknolojiyada iyo Faahfaahinta Adeegga, si tartiib tartiib ah u sameynta adeegga adduunka iyo shabakadda iibka ee lala wadaagayo adduunka iyo qaybinta, Kingsine waa inay sii wadi doontaa dadaal kasta si ay ugu adeegto macaamiisha adduunka oo dhan oo leh tikniyoolajiyad casri ah, wax soo saar la isku halleyn karo iyo tayada khadka tooska ah. adeeg, oo adduunka u fududeeyo Imtixaanka Korantada.
Tijaabiyaha gudbinta farqiga u dhexeeya, Tijaabada gudbinta, Tijaabiyaha Relay Ilaalinta, Imtixaanka gudbinta Dijital ah, Tijaabiyaha gudbinta Ilaalinta Fogaanta, Tijaabiyaha gudbinta sirdoonka, Dhammaan Alaabooyinka